Dhacdadii Nuuradiin, aynu ka dhigano fursad aan ku daraasayno hab-fikirka guud ahaan ardayda
Home QORMOOYIN Dhacdadii Nuuradiin, aynu ka dhigano fursad aan ku daraasayno hab-fikirka guud ahaan...
Qof kasta oo loo tababaray macalinnimo ama wax ka yaqaan Cilmi-nafsigu, waxa uu dhab ahaan u garanayaa da’da u dhexaysa 12 jirka – 19 jirku in ay tahay muddo uu ilmaha yari ku jiro xaalad kala guur ah. Waxa uu ka baxayaa da’dii sin-dheernimada waxa aanu u gudbayaa da’dii qaan-gaadhnimada. Marxaladan kala-guurka ahi waa xilliga ugu xasaasisan koritaanka ubadka. Waa xilliga dariiqa toosan ama ka qaldan labadaas midkood uu qaado, waana xilli ay aad ugu nugul yihiin saamaynta taban iyo ta togan ee deegaanka labadaba.
Marxaladani waa xilliga uu ilmuhu abuurayo baadi-soocdiisa qofnimo (self-identity) isla markaana raadinayo kaalinta qof ahaan uu bulshada ku dhex leeyahay. Shaqada ugu muhiimsan ee Macalinka, waalidka iyo walaalaha ka weyni inay qabtaan ay tahay, keliya waa inay ka caawiyaan siduu si togan ugu abuuran lahaa baadi-soocdiisaa qofnimo, isla markaana u dareemi lahaa inu yahay qof cid kasta ka gaar ah, noloshiisana isaga xilka ugu weyni ka saaran yahay. Waa marxalad asxaabtiisu saamayn badan ku leedahay koritaankiisa, keeno-diidnimada iyo jar-iska-xuurnimaduna waa qayb dabiici ah oo ka mid ah geediga qaan-gaadhnimada.
Haddaba innaga oo indhahaas ku eegayna Ardayda yaryar ee dugsiga Nuuradiin, waxan ku talin lahaa in dhacdadii ka dhacday dugsiga Nuuradiin, aynu ka dhigano fursad aan ku daraasayno hab-fikirka guud ahaan ardayda dugsiyadeena ku jirta, gaar ahaan kuwa nuuradiin, oo aynu cilmi-baadhis ku samayno sababta keentay in Arday yaryar oo aan 20 jir gaadhin, cadaawad intaa leeg u qaadaan dugsigii ay wax ku baranayeen, kuna kacaan falalkaas aadka u kadeedan.
aynu ka dhigano fursad aan ku daraasayno hab-fikirka guud ahaan ardayda
Previous articleBakool: Qarax lagu laalay askar ka tirsan ciidanka Somalia
Next articleKooxda Jigjiga oo qaadday koobka tartanka Gobollada